Daawo: Kooxda Banaadir oo 3-1 uga adkaatey kooxda Elman cayaar ka tirsan horyaalka heerka 1aad oo ka dhacdey Garoonka Banaadir Stadium – idalenews.com
Kooxda Banaadir ayaa ayaa guul weyn ku bilaabatay horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya ka dib markii ay 3-1 ugu awoodsheegteen kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan ee Elman FC, ciyaar xiiso laheyd oo ka dhacday garoonka Kooner ee haatan loo yaqaan Banadir Stadium.
Banadir ayaa waxaa hogaanka u dhiibay Marcel Somson ka dib markii uu dhaliyay kubad karoos aheyd oo ka timid Caadil Nur Mohamed.
Isla qeybtii hore ee ciyaarta ayay Banaadir sii dheereysatay hogaanka ciyaarta markii daafaca Abdirizak Ali Mohamed uu shabaqa dhex dhigay kubada, laakiin ciyaaryahanka ayaa islamarkiiba garoonka laga saaray markii uu jaale labaad ku qaatay funaanada uu iska bixiyay dabaaldegiisa.
Dhamaadkii qeybta hore ayayna Banaadir meel sii geysatay natiijada markii Caadil uu u saxiixay goolka seddexaad ee ciyaarta, iyadoo qeybtii hore lagu kala maray 3-0 oo ay Banaadir Sports Club hogaanka ku heysay.
Qeybtii labaad ayaana Elman ay soo ceshatay gool kaasoo ahaa rigoore uu u saxiixay Shaarkey, balse natiijada weyn kama aysan bedelin.
Banaadir ayaana riski weyn gashay markii ay qeybta labaad casaan ka kala qaateen Mustafa Faransa iyo Iyo Cusmaan, taasoo ka dhigtay inay ciyaarta ku dhameystaan sideed ciyaaryahan.
Waxaana ay ciyaarta ku soo idlaatay 3-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Banaadir oo haatan ka mid noqotay kooxaha hogaanka horyaalka ku haya seddex dhibcood, halka Elman ay soo wajahay guuldarro culus oo ay ku bilowdeen horyaalka.
Qeybtii 2aad: Laami Saarida Wadada dheer ee Xaawo taako ilaa Sayidka ee magaalada Muqdisho